DHIRTA DHIRTA EE DHIRTA: WAXA AY TAHAY, SIDA AY GO'AAMIYEEN XILLI SII KORDHAYA - BEER CAGAARAN
Fikradaha aasaasiga ah
Muddadani way ka duwanaan doontaa noocyada iyo noocyada dhirta qaarkood. Qodobka caanaha nafleyda ah ee calaamadeynaya dhir kasta si gaar ah.
Wakhtiga dhirta waa waqti cayiman muddadaas oo uu geedku marayo xilliga firfircoon ee kobaca. Tusaale ahaan, qajaarka hore u bislaaday, xiliga sii kordhaya waa 95-110 maalmood.
Haddii aan ka hadleyno dhirta dilka ah, sida geedka tufaaxa, jardiinka, bovinka, iwm, ka dibna xilligooda sii kordhaya wuxuu bilaabmaa sida ugu dhakhsaha badan ee burooyinkeeda ubaxu u bilaabaan inay bararaan, iyo waqtigaani wuxuu ku dhamaanayaa dhicid caleemo xilliga dayrta. Intaa waxaa dheer, xilliga qaboobaha, wajiga aan firfircooneyn ee koritaanka geedku wuxuu socdaa - tani maaha xilli sii kordhaysa. Si kastaba ha noqotee, haddii aad si fiican u daryeeshid geedka jiilaalka, waxaad kicin kartaa xilligeeda sii kordheysa, waxaan ka hadli doonnaa waqti dambe.
Waa muhiim! Dhirta dhirta waxaa lagu gartaa noocyada dhirta oo kala duwan.
Xilliga dhirta ee dhirta cimilada ee cimilada iyo cimilada cimilada ayaa ah dhacdo yar oo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay xilliga daaqsinka ah ee geed bannooni ah mudadaas oo kale: laga billaabo bilowga ubax si loogu ururiyo miraha. Ka dib markii in, inkasta oo uu geedku weli cagaaran yahay, waxay si ku meel gaar ah uga baxaysaa xilli sii kordhaysa.
Ereygan wuxuu daboolayaa dhammaan dhirta aag gaar ah. Waxaan ka hadli doonaa dhammaan dhirta aagahayaga, waa maxay xilliga sii kordhaya ee geedaha midhaha iyo sida loo qeexo, iyo sidoo kale ku saabsan xilli sii kordhaya ee dalagyada khudradda ah.
Ma taqaanaa? Laga bilaabo horraantii Disembar ilaa dhammaadka janaweri, xididdada geedaha gabi ahaanba waa kuwo aan firfircooneyn
Sannad-sannadeedka cimri-dheeraadka ah ee cimri-dheeraadka ah waxaa loo qaybin karaa afar xilli:
Dayrta ku meel gaadhka ah;
Muddada nasashada qaraabada;
Kala guurka guga
Wixii dhirta dilka ah ee cimiladeena cimilada, muddadan waxaa la soo celiyaa sanad walba. Xilliga sii kordhaya wuxuu daboolayaa sadexda qaybood ee liiska: 1, 2 iyo 4. Xilliga qaboobaha looma tixgelinayo inuu yahay xilli sii kordhaya. Muddada u dhaxaysa 4 dhibcood ayaa laga yaabaa inay ku bilaabato dib u dhac yar, ama, si tartiib ah, ka hor sidii loo baahnaa. Dhammaan waxay ku xiran tahay marka kulaylka dhabta ah uu bilaabmayo, marka barafka iyo dhaxan habeenku ka baxaan.
Heerkulka, taas oo lagama maarmaan u ah bilawga dhirta caadiga ah ee dhirta, way ka duwan tahay noocyada ama noocyada kala duwan. Tusaale ahaan, xilliga sii kordhaya ee geedka khudaarta ah ayaa horay u soo gala cherry ama pear. Laakiin waxaa loo tixgeliyaa in bilowgii xilliga sii kordhaya ee heerkulka hawadu ay tahay inuu ahaado ugu yaraan +5 ºC. Tani waxay ka welwelsan tahay oo kaliya geedo midho leh, laakiin sidoo kale dalagyada khudradda.
Waa muhiim! Nafaqada dhirta leh Bacriminta macdanta ayaa dardar-gelinaysa geedi-socodka.
Waxaa mudan in la ogaado in xilli sii kordhaya ee dhirta khudradda sannadlaha ah weli ka duwan tahay. Waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay bilowgii geedi socodka, kor u kacay abuur, iyo dhamaystirka - qalajinta dhirta. Laakiin dhirta qaarkood waxay midho u dhali kartaa marar dhowr jeer muddada diiran, ka dibna waxaa loo tirin karaa bilawga bilowga ah ee ubaxyada oo dhan Bisaylkiisa buuxa ee midhaha.
Ma suurtagal in la go'aamiyo xilli sii kordhaya
Xilliga sii kordhaya ee noocyada kala duwan iyo dhirta dhirta waa mid aad u kala duwan oo aan lagu dari Karin qaab dhismeed. Waxaa la aaminsan yahay in mudadani ay socon karto saddex maalmood ilaa saddex bilood. Laakiin dhirta waxaa had iyo jeer saameyn ku leh arrimo kala duwan:
xaalad ciid ah;
cudurrada iyo cudurada kala duwan.
Iyadoo ku xiran arrimahan, xilliga sii kordhaya way kala duwanaan kartaa waqti ka dib. Mararka qaarkood waxay socon kartaa ilaa sagaal bilood! Dhaqamo badan oo ka jira aagageena cimiladu ma haystaan ​​wakhti si buuxda u bislaadaan, oo hore loo soo goostay, maadaama aysan jirin wakhti go'an oo lagu dillaacayo. Kadibna waxay sheegaysaa in xilliga dhirta la dhamaystiray si khaldan. Laakiin weli waxaa jira hab lagu ogaado xilli sii kordhaya ee dhirta iyo fahamsan waxa ay dhab ahaantii tahay. Tusaale ahaan, markaad iibsato bacda ah abuurka, waa muhiim in la tilmaamo xilliga sii kordhaya, bilowga iyo dhammaadka. Sida geedo midho leh, waxaan horay u sheegay in bilowga - marka ubbooyinku barara, iyo dhamaadka - iyo dayrta caleemaha. Tusaale ahaan, xilliga sii kordhaya ee noocyada kala duwan ee baradho waxay ku bilaabmayaan biqilka ee biqil, iyo dhameeyo marka geedka ay si buuxda u qallajin iyo baradho waa la qodi karaa.
Sidee tahay xilliga sii kordhaya ee dhaqamada kala duwan
Dalagyada kala duwan, xilliga soo kordhaya waxay ku socotaa siyaabo kala duwan (waxa ay tahay iyo sida eraygani uga duwan yahay xilli sii kordhaya, hore ayaan u sheegnay bilowga).
Ma taqaanaa? Lemon Citrus waa ugu nugul kulaylka inta lagu jiro xilli sii kordhaya.
Xilliga abuurka dalagyada khudaarta ah:
Dhirta caleenta waxay qaadataa celcelis ahaan 110 - 130 maalmood. Tani waa tilmaame celcelis ah, maaddaama ay jiraan baradhada hore, dhexe iyo goor dambe. Muddadani waxay ku bilaabataa biqilka jeermiska. Markaas yimaado muddada pollination iyo ubax. Markaas caleemaha cagaaran waxay u muuqdaan kuwo yar yar "tufaax cagaaran", oo aan lahayn wax aan la cuni karin. Marka uu dhirta u jarto, xilliga sii kordhaya wuxuu dhammaanayaa oo waad gooshi kartaa.
Dhirta qajaarka hore u bislaaday waxay qaadataa 95-105 maalmood, iyo Bisaylkiisa dambe - 106-120 maalmood. Ka hor inta ubax of baadiyaha qajaar, waxay qaadan kartaa 25-45 maalmood, ka dib markii kaas oo baadiyaha bilaabaan inay midho u dhali. Iyo labadii bilood ee ugu dambeeyey xilli sii kordhaya dhirta ayaa sii waday in la barbardhigo iyo waqti isku mid ah miraha cusub. Ka dib markii ay, waxay u dillaacaan xilliga dayrta hore, iyo waqtigaan dhammaado.
Xilliga sii kordhaya ee yaanyada (dadku waxay yiraahdaan, inkastoo ay sax tahay in la yidhaahdo: "xilliga sii kordhaya ee yaanyada") waxay la mid tahay isla xilliga qajaarka. Wakhtiga xaddidan oo kaliya ayaa waxoogaa ka duwan, taniyo yaanyada loo qaybiyo noocyada soo socda: Bisaylkiisa hore - 55-75 maalmood, Bisaylkiisa hore - 76-95 maalmood, Bisaylka dhexe - 95-110 maalmood, dhammaadka dambe - 111-120 maalmood iyo dhammaadka - 121-135 maalmood.
Xilliga sii kordhaya ee kaabajka wuxuu soconayaa 3 ilaa 6 bilood, iyadoo ku xiran noocyada dhirta.
Xilliga sii kordhaya ee dhirta miraha wax yar way ka duwan tahay dalagyada khudradda. Halkan waa tusaalooyinka xilliga sii kordhaya ee geedaha dilaaga ah:
Waqtiga dhirta ee noocyo badan oo hore iyo mid dhexe ee tufaaxa ayaa la yimaad kuleylka koowaad, waxaana dhihi karnaa in tani ay tahay tilmaame weyn. Marka heerkulku gaaro +5 ºC oo uusan ku dhicin toddobaadka dhexdiisa, geedku wuxuu bilaabmayaa inuu ku yaalo. Tani waa bilowga xilliga sii kordhaya. Muddadani waxay dhamaataa xilliga dayrta, marka caleemuhu dhacaan.
Cherry iyo tubta ka bilaabaan xilli sii kordhaya 10-20 April. Muddada ka soo baxda muuqaalka burooyinkeeda cagaarka caleenta waxay qaadataa hal iyo badh ilaa laba toddobaad. Markaas, horraanta May, dhirta bilaabaan inay Bloom
Dhirta miraha ayaa bilaabmaa marka heerkulku xasilan yahay oo gaaro celcelis ahaan +6 ºC. Bilowga xilligan, nidaamka xididka geedka wuxuu bilaabmaa inuu noqdo mid firfircoon isla markaana dejiya heer dhexdhexaad ah 15-18 ºC.
Waa muhiim! Xilliyaadka dhirta waxay ku xiran yihiin genetics ee geedka, iyo waqtigaan mar walba si sax ah looma dhigi doono.
Waa maxay cagaarka dalagyada qudaarta ah iyo geedo midho leh, waxaynu soo saarnay. Ereyada yaryar waa in lagu sheegaa hadhuudhka, sababtoo ah dad badan ayaa u maleynaya in si khalad ah u korodhay aagga cimilada. Mararka qaarkood hadhuudhku si fudud uma haynin waqti ay ku dhammaystiraan xilliga sii kordhaya, waana la goostaa ka hor, ka hor bilawga hargabka adag. Talo khabiir ah oo ku saabsan arrintan: Beerka horey u soo gaabi oo gaabi xili sii kordhaya, taas oo aan ka wada hadli doono qeybta soo socota.
Ma suurtogal in la gaabiyo xilli sii kordhaya iyo sida loo sameeyo
Yaraynta xilliga sii kordhaya - tani waa marka uu warshadu mareyso marxaladda dhirta oo dhan marka loo eego waqtiga guud ahaan la aqbalo. Bannaanka u badan inta badan waydiiyaan su'aalaha noocaas ah, sababtoo ah qof waliba wuxuu isku dayayaa in uu isku dayo qajaarka iyo yaanyada cusub ka hor intii aaney noqon.
Si arrintan loo sameeyo, bilaabi geedo ku soo beerto February. Qaar badan waxay ku beeraan abuurka sanduuqyada yaryar waxayna ku ridaan windowsill, qaarna waxay abuuraan koriyo qaas ah. Dhamaan hababkaan waa kuwo weyn haddii aad rabto in aad ku beerato khudaarta, kuwaas oo ah kuwa siiya miro.
Laakiin haddii aad ogaato waxa xilliga sii kordhaya ee tufaaxa, Brussels iyo noocyo kale oo kaabajka ah, waxay noqotaa mid cad oo ah in aysan u keenin miro, xaqiiqda ah, waxaad cunaysaa caleemaha. Halkan waxaan u baahannahay hab fudud oo kala duwan si loo soo gaabiyo xilli sii kordhaya. Xaaladdan oo kale, waxaa habboon in la xoojiyo koritaanka iyo gaabinta geedi socodka ubaxa. Tani waxaa lagu samayn karaa diyaarin gaar ah iyo Bacriminta.
Waxaa jira nooc saddexaad ee yaraynta xilli sii kordhaya. Ma aha in qof kastaa fahmo waxa geedi socodka yaraynta xilliga sii kordhaya ee geedaha midhaha macnaheedu yahay. Si arrintan loo sameeyo, iska ilaali warshadda. Geedaha xilliga dayrta waxay u baahan yihiin in si fiican loo waraabiyo raashinka macdanta kala duwan. Xilliga jiilaalka, qabow daran, waxaad u baahan tahay inaad baraf badan ku rido nidaamka xididka geedka. Markaas guga wuxuu bilaabi doonaa inuu hore u bloomo iyo si firfircooni badan.
Hadda waxaan fahamsanahay geeddi-socodka xilliga sii kordhaya ee dhirta kala duwan waxaana fahmay waxa ay tahay iyo sida loo maareyn karo geeddi-socodka. Ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa in aan sheego in ninkii beerta oo idil uu yeelan karo goosashada weyn haddii uu aqbalo maqaalkan.